UApple uqeshe umphathi weWarnerMedia ukukhulisa iApple TV + | Ndisuka mac
UApple uqeshe isigunyaziso seWarnerMedia ukukhulisa iApple TV +
U-Apple uzimisele ukuba inkonzo yakhe yolonwabo yedijithali, i-Apple TV +, iya kukhuphisana nezinye iinkonzo ezikhoyo ezinjengeNetflix okanye iHBO. Ngomgangatho awuyi kuba kunye nomnqweno. Intshukumo entsha yenkampani iseta imigaqo yenkampani efuna le nkonzo. Ukunyusa ubuchule kunye nangaphezulu kwayo yonke into elungileyo yokutyhala kumxholo wokuqala weqonga. Umphathi weWarnerMedia uza kujoyina iApple TV +.
Ngokwe- ingxelo entsha evela kuLwazi, U-Apple uqeshe UJessie Henderson ovela kwiWarnerMedia njengoko inkampani ifuna ukwandisa utyalomali kwimveliso yefilimu yoqobo. Olu tyikityo lutsha luza kujoyina icandelo leefilimu zoqobo njengoko iApple ifuna ukwandisa inani lemiboniso bhanyabhanya eliyivelisayo. Ingxelo ithi iApple inyusa imveliso ekujolise kuyo kwimidlalo bhanyabhanya, + inyuka ukusuka kulindelo lwe-10 ukuya kwi-12 ngonyaka.
KwiWarnerMedia, uHenderson wongamela iifilimu zeHBO Max kwindima yakhe njengesekela mongameli olawulayo. Ulwazi luthetha ngoku isebenza ngokusondeleyo nentloko ye-Apple yophuhliso lwento, uMatt Dentler. Asazi ukuba iya kushiya uphawu lwayo nakweziphi na izihloko esinazo kwiphothifoliyo yethu, ezinje, Ukubulala kweNyanga yeentyatyambo, ekhokelwa nguMartin Scorsese, kunye Emancipation, Ijongana noWill Smith, okwangoku ekwimveliso. Kodwa ngokuqinisekileyo kwezi zilandelayo, ewe.
Okwangoku, ilayibrari ye-Apple TV + ibandakanya iimovie ezili-17. Inani eliphantse lihambelane nexesha lenkonzo ebelisebenza ngalo, iinyanga ezili-16. Ke kunokuthiwa sele ifikelele malunga nenqanaba lenyanga ukuya kuthi ga ngoku. Ngoku, le ngxelo intsha iqinisekisa ukuba inkampani yaseMelika ifuna ukunyusa eli nani. Awufuni ukuba kude kakhulu emva yeentshaba zayo ezichanekileyo.
Ngesi sizathu, kulo nyaka sibonile ukuba inkampani ifikelele njani izivumelwano ezibalulekileyo kunye noKonwaba kwezolonwabo kunye noPhilayo lweSkydance ukuqinisa ngakumbi iphothifoliyo yefilimu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » UApple uqeshe isigunyaziso seWarnerMedia ukukhulisa iApple TV +
Ukuqhekeza u-Facebook, ukonyusa i-RAM kwiiMacs kunye neM1 kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
I-Pwn2Own 2021 okhuphisana nayo iphumelele i-100.000 yeedola yokugenca iSafari